Varane & Sancho Oo Seegaya Kulanka Furitaanka Premier League-ga – Garsoore Sports
Varane & Sancho…
Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in saxiixyada cusub ee Raphael Varane iyo Jadon Sancho aysan kusoo bilaaban doonin kulanka furitaanka Premier League ee ay la ciyaarayaan Leeds United Sabtida soo aaddan.
Imaanshaha labada ciyaaryahan ayaa ah mid si weyn kor ugu qaadeysa rajada United xilli ciyaareedkan. Kooxda ayaa ceyrsaneysay Sancho muddo labo sano ah, waxaana ugu dambeyn uu kagasoo wareegay Borussia Dortmund bishii la soo dhaafay. Imaatinka Varane ayaa xoogaa ka sii yaab badnaa iyadoo daafaca uu kooxda Red Devils kagasoo dhaqaaqay Real Madrid.
Labaduba waxay kasoo muuqdeen Euro 2020 sidaa darteedna, waxay ka daaheen inay kusoo laabtaan tababarka kooxda. Isagoo la hadlayay warbaahinta kahor kulanka saaxiibtinimo ee ay kooxdiisu la ciyaareyso Everton Sabtida Solskjaer ayaa xaqiijiyay in tani ay saameyn ku yeelan doonto helitaanka xiddigihiisa kulanka furitaanka Premier League-ga ee ay la yeelanayaan kooxda Leeds.